Mashruuca Beyond Zero oo helay deeq lacageed – The Voice of Northeastern Kenya
Mashruuca Beyond Zero oo helay deeq lacageed
Shirkado laga leeyahay dalka Japan ayaa deeq lacageed waxay garsiiyen marwada 1-aad ee dalka margaret Kenyatta si ay ugu wado barnaamijkeeda loo yaqaano Beyond Zero oo ay ku dooneyso in ay kor ugu qaado caafimadka hooyada iyo dhalaanka.
Ms Kenyatta ayaa maanta waxay afar shirkadooda ka gudoontay lacag dhan 8 Milyan oo shilin si loogu soo iibiyo qalab casri ah oo baaritano dhanka caafimadka ah lagu sameeyo.
Shirkadahan oo ka qeyb galayeen shirweynaha lixaad ee dalka Japan iyo dalalka qaarada Africa ayaa shaybarada ay bixinayaan ayaa lagu kala sheegay Toyota Tsusho, Sysmex, Terumo Corporations, Eiken Chemica oo ah kuwa heer sare oo wax lagu baaro.
Xarumahaasi ayaa la sheegay in ay awood u leeyihiin baaritanka cudurada ku dhaca dhiiga iyo sidoo kale in ay soo saari karaan meelaha u waxyeelada gaarsiiyo cudurka dilaaga ah ee HIV-AIDS-ka.
Sheybaaradan ayaa awood buuxa u leh in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u ogadan cudurada saameynta ku yeesha dhiiga, kiliyaha, beerka iyo goobo kale oo muhiim ah.
Sidoo kale afartan shirkado ayaa waxay u balan qaaden Ms Kenyatta in ay ka caawin doonaan qalabeynta isbitaalada ay ka hirgalineyso 47 County ee u dalka ka kooban yahay.
Tan ayaa imaaneysa xilli barnaamijkan ay wado Xaaska Madaxweynaha la in filaayo in ay guda gasho hawl cusub oo ay ku dhisayso isbitaal weyn oo u qiimihiisa ku kacayo lacag dhan 2.2 bilyan oo shilinka dalka ah.
Isbitaalkaan oo qalabkiisa loo dhameystiri doono ayaa la qorsheynayaa in uu lahaado 150 sariir oo kuwa caadiga ah iyo 7 sariir oo la dhigi doono qeybta la seexiyo bukaannada ay xaaladooda liidato ee loo yaqaanno ICU-da iyo sidoo kale qeybo kala duwan.
← Isbahaysiga Jubilee oo lagu wado in u isticmaalo 2 bilyan
Dowlada Japan oo sheegtay in ay u dagaalami doonto sidii Africa ay xubin joogta ah oga noqon lahayd golaha ammaanka →